Wararka - Isfahan la'aanta xulashada muraayadaha qorraxda.
Faham la'aan 1:
Dhammaan muraayadaha qorraxda 100% waxay u adkaystaan ​​UV
Aynu marka hore fahamno iftiinka ultraviolet. Dhererka hirarka iftiinka ultraviolet wuxuu ka hooseeyaa 400 uv. Ka dib marka isha la soo bandhigo, waxay dhaawici doontaa cornea iyo retina, taasoo keenta keratitis qoraxda iyo dhaawaca xuubka xuubka.
Muraayadaha qoraxda ee leh shaqada ka hortagga ultraviolet guud ahaan waxay leeyihiin dhowr siyaabood oo cad:
1. Calaamadee “UV400″:
Waxay ka dhigan tahay in mawjada go'doominta ee lenska ilaa fallaadhaha ultraviolet waa 400nm, taas oo ah, qiimaha ugu sarreeya ee gudbintiisa muuqaal ee hirarka ka hooseeya 400nm kama badnaan karo 2%.
2. Calaamadee "UV", "ilaalinta UV":
Waxay muujinaysaa in xannibaadda hirarka lenska ee ka soo horjeeda fallaadhaha ultraviolet ay tahay 380nm.
3. Calaamadee "100% nuugista UV":
Waxay ka dhigan tahay in lensku leeyahay 100% nuugista shucaaca ultraviolet, taas oo ah in la yiraahdo, celceliska gudbinta ultraviolet kama badna 0.5% guud ahaan, kaliya kuwa leh calaamadaha kor ku xusan ayaa loo arki karaa muraayadaha qorraxda shaqo ka-hortagga fallaadhaha ultraviolet ee dareenka dhabta ah.
Faham la'aan 2:
Ookiyaalaha qoraxda ee la daboolay ayaa ka fiican muraayadaha caadiga ah
Waxa loogu yeero muraayadaha muraayadaha, marka lagu daro shaqooyinka muraayadaha qorraxda, waxay sidoo kale daciifin karaan oo ay xannibi karaan jahwareerka.
Iftiin iftiimaya, dhalaalid, milicsi aan joogto ahayn walxaha, iwm, oo u gudbi dhidibka gudbinta ee jidka saxda ah
isha si ay u milicsato oo ay aragtidu hodan uga dhigto Heerarka, aragtidu waa mid cad oo dabiici ah. Polarizers waa guud ahaan
ku haboon hawlaha dibadda sida wadista, kalluumaysiga, badmaaxidda, rafting biyaha cad, iyo skiing. Sida midabka
lenses polarizer guud ahaan waa madow, looma baahna in la xidho maalmaha daruuraha ah ama gudaha gudaha. Waa inaad doorataa
muraayadaha qorraxda caadiga ah qaarkood si ay indhahaaga uga ilaaliyaan fallaadhaha ultraviolet.
Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Xisbiga, Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya,